मंगलबार, असार २१, २०७९ १०:०८:५३ युनिकोड
दूधको मूल्य समायोजन हुँदै, प्रतिलिटर रु १० वृद्धि हुने बिहीबार, माघ ६, २०७८
लाग्यो माईबेनीमा मेला आइतबार, माघ २, २०७८
इलामको झण्डीडाँडाबाट मेचीनगरसम्मको प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल आइतबार, माघ २, २०७८
पनौतीमा माघ महिनाभर बाह्रवर्षे मकर–स्नान ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा बाह्रवर्षे मकर मेलाअन्तर्गत आजदेखि मकर–स्नान सुरु भएको छ । तर स्वास्थ्य सुरक्षा–मापदण्ड अपनाएर २५ जनाभन्दा कम व्यक्तिको उपस्थितिमा स्नानमात्रै गर्न पाइने मापदण्ड बनाइएको छ । आइतबार, माघ २, २०७८
ताकमकोतबाट प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ स्थित धार्मिक पर्यटकीयस्थल ताकमकोतबाट साहसिक मानिने प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको छ । भ्रमणको क्रममा आएका अष्ट्रियाका एक नागरिकले बिहीबार ताकमकोत परिसरबाट प्याराग्लाइडिङको उडान गर्नुभएको थियो । समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार ५०० मिटर उचाइमा रहेको कोत परिसरबाट प्याराग्लाइडिङको उडान गर्नुभएका उहाँले करिब आधा घण्टा आकासमै बिताएर ताकमको किमचौर फाँटमा अवतरण गर्नुभएको स्थानीयवासी कृष्णराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बिहीबार, पुस २९, २०७८
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा बन्दीपुरमा आठ हजार पर्यटक अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा आठ हजार पर्यटक पुगेका छन् । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा शुक्रबार र शनिबार आठ हजार पर्यटकले बन्दीपुरको भ्रमण गरेका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा बन्दीपुरमा दुई दिन खाना महोत्सव गरिएको थियो । क्षेत्रीय होटल सङ्घ बन्दीपुरका अध्यक्ष विपीन प्रधानले नयाँ वर्षको अवसरमा बन्दीपुरमा आन्तरिक पर्यटक खचाखच भरिएको भएको जानकारी दिनुभयो । “विदेशी पर्यटक पाँच÷छ जनामात्रै देखिए, बाँकी सबै आन्तरिक पर्यटकले बन्दीपुर भरिभराउ भए”, उहाँले भन्नुभयो । शनिबार, पुस १७, २०७८
विदेशबाट फर्किएका युवा व्यावसायिक कृषिमा म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–१ तल्लो डडुवाका ३६ वर्षीय कृष्ण पौडेलले व्यावसायिक कृषिबाट स्वरोजगार बन्नुभएको छ । दश वर्ष जापानमा काम गरेर फर्किएका पौडेलले दुई वर्षअघि सुरु गरेको टिकेबी बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मबाट मेहेनत गर्ने हो भने स्वदेशमै आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सुन्तला, तरकारी र बाख्रापालन गर्नुभएका उहाँले कृषि फार्मबाट कम लगानीमा छिटो आम्दानी लिन सकिने बताउनुभयो । “चारवटा टनेलमा गोलभेँडा र तरकारी खेती गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “चार सय बोट सुन्तला छन् । अहिले ५० वटाबाट रु ७० हजार बराबरको सुन्तला बिक्री भयो ।” शनिबार, पुस १७, २०७८
हिउँदे वर्षाले किसानमा खुशी पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा परेको हिउँदे वर्षाले अन्नबालीमा सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । लामो समयदेखि पानी नभएका बेला दुई दिनसम्म परेको हिउँदे वर्षाले किसान उत्साहित भएका छन् । मौसमी सिँचाइ भने चार हजार ८७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ । आकाशे पानीका भरमा खेती गर्ने पहाडका अन्नबालीलाई हल्का वर्षाले सिँचाइको रूपमा काम गरेको किसान बताउँछन् । शनिबार, पुस १७, २०७८
गुण एयरलाइन्सले सुरु गर्दै काठमाडौँ–सुर्खेत उडान निजी वायुसेवा कम्पनी गुण एयरलाइन्सले आइतबारदेखि काठमाडौँ–सुर्खेत व्यावसायिक उडान सुरू गर्न लागेको छ । सन् २०२२ को सुुरूआतमै यो कम्पनीले थप गन्तव्यका रूपमा सुर्खेत उडान गर्न लागेको हो । हाल बुद्ध एयरलाइन्सले मात्र काठमाडौँ–सुर्खेत रुटमा उडान गर्दै आएको छ । गुण एयरलाइन्सका प्रवक्ता एवं बजार प्रमुख प्रज्ज्वल थापाले आइतबार (पुस १८ गते) देखि १८ सिटे जहाजबाट उडान सुरुआत गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । शनिबार, पुस १७, २०७८
कुमारी बैंकको सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनी अपरिचित समूहले कुमारी बैंक लिमिटेडको सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैंकको सूचना प्रविधि शाखामा साउदी ग्रुप नाम गरेको इमेलबाट ह्याकरले सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनीसहितको चेतावनी आएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले ह्याक गर्ने धम्की आएपछि बैंकको सबै सिष्टम बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ह्याकरले चेतावनी दिनासाथ सिष्टम बन्द गरिएको थियो । आवश्यक परीक्षणपछि बैंकका सबै सिष्टम खोल्ने तयारी गरिएको छ । बिहीबार, पुस १५, २०७८
बेगनास बराहको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा चासो कवि मुकुन्दशरण उपाध्यायको कविता सङ्ग्रह प्राकृत पोखराको ‘ताल’ शीर्षकको कविताको यस पंक्तिले पोखरा र आसपासका तालतलैयाको चर्चा मात्र गरेको छैन यहाँकोे सुन्दरताको पनि वर्णन गरेको छ । सात तालको वाटिका शहरका रुपमा ख्याती कमाएको लेखनाथका ताल साविक लेखनाथ नगरपालिकाभित्र रहेकामा अहिले लेखनाथसमेत समेटेर पोखरा महानगरपालिकामा गाभिँदा कतै यो क्षेत्र ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने चासो र चिन्ता पनि कायमै छ । यिनै चासो र चिन्ताका बीच पछिल्ला समयमा लेखनाथको मुख्य पहिचानका रुपमा स्थापित बेगनास, रुपालगायतका तालतलैयाको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सरोकारवाला संस्था जागरुक बन्न थालेका छन् । मंगलबार, पुस १३, २०७८
चुहावट नियन्त्रणमा गुणात्मक फड्को मार्दै प्राधिकरण एक प्रतिशतमात्रै चुहावट घटाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै रु ७० करोड बराबरको मुनाफा हुन जान्छ । पछिल्ला दिनमा बिजुलीको चुहावटको मात्रामा वृद्धि भएको थियो । कोरोना कहरका कारण प्राधिकरणले अभियानका रुपमा चुहावट नियन्त्रणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको थिएन । सोमबार, पुस १२, २०७८
घुम्न जाने हैन त गाजा दह ? तपाईं घुमघामका लागि बागलुङ रोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने गाजा दहलाई पनि गन्तव्यमा समेट्नुहोला । प्रकृतिको भव्यतामा रमाउने जो कोहीका लागि यो एक अनुपम थलो हो । पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा सूचीकृत गाजा दह जैमिनी नगरपालिका–३ दमेकमा पर्छ । यो सदरमुकामदेखि नजिकै छ । गाजाको सौन्दर्य दहमा मात्र सीमित छैन । पर्यावरण र संस्कृति पनि त्यहाँका चिनारी हुन् । हरेक ऋतुकालमा भिन्न विशेषतामा खुल्छ, गाजा दह । कहिले हिउँ फूल्छ गाजामा, कहिले लालीगुराँस । सोमबार, पुस १२, २०७८
‘क्रिसमस डे’ मनाइँदै क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनको सम्झनामा आज यस समुदायका मानिसले क्रिसमस डे मनाउँदैछन् । आजभन्दा दुई हजार २१ वर्षअघि डिसेम्बर २५ तारिखका दिन येशु ख्रीष्टको जन्म इजरायलको वेथलेहेममा भएको थियो । पवित्र आत्माबाट गर्भवती भई कुमारी मरियमबाट जन्मनुभएका येशु ख्रीष्टले तीन मुख्य खुसियाली दिनुभएको नेपाल ख्रिष्टियन महासङ्घका अध्यक्ष सिबी गहतराजले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुक्ति, प्रेम र शान्ति दिनुभएको विश्वासमा क्रिश्चियन समुदायले आजको दिनलाई तीन वटै दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन् । शनिबार, पुस १०, २०७८
बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ फड्को ः विद्युत् व्यापार कम्पनीले पायो अनुमति सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणले झण्डै तीन वर्ष पहिले सो कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिका लागि माग गर्दै आएको थियो । “विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । शनिबार, पुस १०, २०७८
दोलखाको कालिञ्चोक क्षेत्रमा हिमपात दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोकमा आज दिउँसोदेखि हिउँ पर्न सुरु भएको छ । कालिञ्चोकको कुरी क्षेत्र तथा जिल्लाको उच्च भू–भागमा सामान्य वर्षासहित हिमपात शुरु भएको हो । कालिञ्चोकको कुरी तथा आसपासको क्षेत्रमा यो वर्षकै दोस्रो पटक आज दिउँसोदेखि हिमपात सुरु भएको कालिञ्चाकका होटल व्यवसायी हरी ओलीले बताउनुभयो । शनिबार, पुस १०, २०७८
भाडामा बस्नेलाई पनि विद्युत् मिटर उपलब्ध हुन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु ।” शनिबार, पुस १०, २०७८
इलाममा उत्पादन भएका किबीको बिरुवा भुटान निर्यात इलाममा उत्पादन भएका किबीको बिरुवा भुटान निर्यात हुन थालेको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट किबीको बिरुवा भुटान निर्यात हुन थालेको हो । भुटानले किबी खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गरेपछि बिरुवाको माग भएको प्लान्ट क्वरेण्टीन कार्यालय झापाका प्रमुख देविन्द्र साहुले बताउनुभयो । बिहीबार, पुस ८, २०७८
127 8910 11 12 13 28 29 Next